Jikwaa nchekwa PPA na Ubuntu | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Faịlụ FileLet jiri, Na-atụ aro, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
¿N'ihi gịnị tinye Ebe nchekwa PPA ma oburu na anyi nwere otutu puku mmemme site na iji ndi ozo Ubuntu repositories?
Faịlụ ngwugwu nkeonwe (Pnke onwe Pna-arụ ọrụ Archive, na Bekee), kwe ka ndị mmepe kesaa ngwanrọ na mmelite ozugbo nye ndị ọrụ Ubuntu na-enweghị ichere maka ebe nchekwa Ubuntu iji melite.
Launchpad, saịtị na-akwado ọtụtụ PPA dịnụ, na-ewuli ọnụọgụ abụọ ma na-echekwa ha n'otu ebe nchekwa. Nke a pụtara na ndị ọrụ Ubuntu nwere ike ịwụnye ngwungwu ndị a n'otu ụzọ ahụ eji eji ha wụnye ngwa ndị ọzọ na Ubuntu, yana uru agbakwunyere na ha ga-enwe mmelite kachasị ọhụrụ maka mmemme ndị a ma nwee ike ịchọta mmemme ndị na-adịghị n'ime ụlọ ọrụ gọọmentị.
1 Etu esi etinye ebe nchekwa PPA
2 Esi ewepu ebe nchekwa PPA
3 Etu esi ewepu PPA na ngwugwu ya na akpaghị aka
4 Otu esi gbanyụọ nchekwa PPA
Etu esi etinye ebe nchekwa PPA
Ka anyị were ihe atụ bara uru. Ka e were ya na anyị chọrọ ịwụnye Shutter. Ihe mbu anyi gha amata bu aha PPA anyi choro itinye. Na peeji nke Shutter PPA o doro anya na ịgbakwunye ebe nchekwa a ọ dị mkpa iji rịba ama ppa: shutter / ppa.
Nhọrọ 1: site na akara iwu
Ihe ị ga - eme bụ imeghe ọdụ ma tinye iwu kwesịrị ekwesị iji tinye PPA, melite ndepụta ngwugwu, ma wụnye usoro achọrọ (na ihe atụ anyị, Shutter).
sudo add-apt-repository ppa: shutter / ppa sudo apt-nweta melite sudo apt-nweta wụnye shutter
Nhọrọ 2: site na Centerlọ Ọrụ Software
1.- Mepee Ubuntu Software Center.
2.- Dezie > Mmalite nke Software
3.- Mgbe ahụ na taabụ Ngwanrọ ndị ọzọ, pịa Tinye ma tinye akara PPA. N'ihe atụ anyị: ppa: shutter / ppa wee pịa anabata.
4. Wụnye usoro achọrọ (na-aga n'ihu na ihe atụ anyị, Shutter).
Esi ewepu ebe nchekwa PPA
Nhọrọ 1: wepu PPA site na usoro iwu
Gbaso ihe nlereanya anyị si Shutter:
N'ụzọ doro anya, a ga-eji ihe ndị kwekọrọ na nke ọ bụla dochie anya ppa: shutter / ppa.
3.- Mgbe ahụ na taabụ Ngwanrọ ndị ọzọ, pịa Wepu wee pịa anabata.
Kpachara anya: nke a ga-ewepu PPA na ndepụta nke ngwugwu mana anaghị ewepu ngwugwu arụnyere na PPA, ọrụ ga-eji aka rụọ ya. Iji gbanye usoro a, nke nwere ike isiri ụfọdụ ike, enwere ngwaọrụ dịka PPA Purge ma ọ bụ Onye njikwa Y-PPA.
Etu esi ewepu PPA na ngwugwu ya na akpaghị aka
PPA-Purge bụ akwukwọ dị mfe nke ga-ewepu PPA dị na ajụjụ yana ngwugwu niile arụnyere na ya.
1.- Wụnye PPA-Purge
2.- Jiri PPA-Purge wepu PPA. Gbaso ihe omuma atu anyi:
Nhọrọ 2: iji YPPA
1.- Wụnye Y-PPA:
2.- Wepụ PPA na ajụjụ. Y-PPA Manager interface interface bụ nghọta zuru oke iji chọpụta ihe ị ga-eme.
Otu esi gbanyụọ nchekwa PPA
Kwụsị PPA na-egosi na sistemụ ahụ agaghị enweta mmelite ọ bụla site na PPA ahụ, mana ngwugwu arụnyere na mbụ agaghị ewepụ. Uru nke iwepu PPA karịa iwepu ya bụ na ọ dị mfe ịmegharị ya ọzọ.
Iji gbanyụọ PPA:
3.- Mgbe ahụ na taabụ Ngwanrọ ndị ọzọ, mepee igbe dị n'akụkụ PPA na ajụjụ wee pịa anabata.
Ọ dị mkpa iwepu ahịrị abụọ nke PPA ọ bụla.
N'otu ụzọ ahụ, enwere ike ịmegharị PPA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Jikwaa nchekwa PPA na Ubuntu
Ezigbo isiokwu (dị ka mgbe niile) 😀
Obi uto iguru gi Pablo ^^
Daalụ Saito! Atụrụ m uche gị! Ọ dị mma ịhụ gị ebe a ...
O doro anya! Daalụ.
Zaghachi Juan Carlos Senar
Ọ dị ezigbo mma.
OMG !! Daalụ nke ukwuu.
Obere echiche iji mezue nnukwu ndu a: ị chetụla echiche banyere itinye mmemme nke gụnyere na nkesa n'onwe ya ma ọ bụ na ụlọ ọrụ gọọmentị nwere naanị ụdị nke ochie ma ọ bụ nke ị wụnyegoro?
Iji maa atụ, arụnyere m Azureus aka Vuze iyi mmemme site na ebe nchekwa gọọmentị, na mgbe m jiri ya ọnwa ole na ole ma nwee faịlụ zuru oke na mmiri iyi na-arụ ọrụ, enwere m nsogbu nke enweghị m ike iwepụ ma tufuo ọrụ ahụ niile yana m Achọrọ naanị otu ngwaọrụ dị na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke gọọmentị ubunto edobeghị emelitere.
Echere m, echere m, na m jisiri ike mee ya mana ọ bụ ezigbo odyssey na amụtaghị m ma ọ bụ ghọta etu m si mee ya
Ndewo gambi! n'ezie ... usoro dị na ikpe ahụ bụ otu. Install wụnye PPA, ị na-emelite ndepụta nke nchịkọta ma mgbe ị kwalite ọ ga-agwa gị na e nwere usoro ọhụrụ nke usoro ihe omume ahụ (n'ọnọdụ gị, azureus) nke na-abụghị onye ọzọ karịa nke dị na ppa.
Echere m na m doro anya.
Ọ dị mma, mana oge ụfọdụ ppa akọwapụtara maka nkesa gụnyere.
Enwere m nsogbu dịka ọmụmaatụ nke mmelite nke Turpial 3.0. ndị tinye ya na http://ppa.launchpad.net/effie-jayx/turpial/ubuntu/dists/saucy/
mgbe ngwanrọ ngwanrọ m na-elekwasị anya na ndị ọrụ Olivia ma ọ bụ "nkụda mmụọ" (Ana m eji Linux Mint)
Dị ka m na-egosi na faịlụ ndị a kwadoro na saucy, anaghị m ebudata ma wụnye mmemme ahụ.
Enweghị ike ịkọwa nke ọma! ... ụbọchị ndị a, m ga-anwa bulite YPPA Manager a sụgharịrị n'asụsụ Spanish na 1 Naanị DEB 🙂 wụnye ihe DEB na ọ bụ ya, ọ nweghị ezi uche ... ọ kwesịrị ịbụ maka ndị amaghi ka esi tinye PPA ma wunye ya I kwesiri igbakwunye PPA lol. Ezigbo ederede, ọ ga-eme ọtụtụ. Cheers!
Hụ blog a n'anya, Pablo! Ezigbo atụmatụ na ọdịnaya bara uru. Ajuju m a gbadoro ukwu na osiso os na osiso ya na "Y PPA" na ngwanrọ ngwanro; Ọ ga - ekwe omume na ịwụnye nke mbụ agaghị eme ka onye nke abụọ ghara ịrụ ọrụ? M na-agbalị ịmalite ya na mba,
mba, echeghị m otú ahụ…
Enweghị echiche ọ nwere ike ịbụ, mana echeghị m na sọftụwia sọftụwia kpatara nsogbu ahụ.
Carlos Cifuentes onye mbinyeaka oyiyi dijo
Ezigbo peeji, nke ahụ na abụ m ogbo, agadi nwanyị mana m ka na-amata ihe ị na-akụzi na mgbakwunye na ndị na-ebu amụma ma ọ bụ na-ekwu okwu.
Zaghachi Carlos Cifuentes
Ana m ekele gị nke ukwuu Carlos maka ihe ị na-ekwu, ọ gaghị egbu oge ịmụ ihe.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka onyinye gị, abụrụ m onye ọhụrụ na Linux ma ị nyere m aka ịghọta ụwa a magburu onwe ya!
Zaghachi to danny672007
Chakra Linux mpaghara nchekwa (Kwesịrị iji distros na-eji pacman)